Nhau - Iyo yekuvandudza nzira yekutakura mune ramangwana.
Conveyor ndeimwe yeakanyanya mashandiro maturusi emabhizimusi emazuva ano, michina yekushandisa uye michina, ndiyo hwaro hwesangano rakaringana rekugadzira kwakawanda uye michina yekuyerera maitiro. Kune echitatu mapato emabhizimusi, mutakuri ndiyo inyanzvi uye hwaro hwehurongwa hwekuronga zviitiko zvekugadzirisa, izvo zvinoratidza kugona kwezvinhu zvebhizinesi.
Conveyor ndiyo hwaro hwezvinhu zvehurongwa hwezvinhu. Nebudiriro uye kufambira mberi kwekugadziriswa, michina yekushandisa yakagadziridzwa nekugadziriswa. Mumunda wezvigadzirwa zvekushandisa, michina mitsva yakawanda iri kuramba ichibuda, iyo inoderedza zvakanyanya kushanda nesimba kwevanhu, inovandudza mashandiro ekushanda pamwe nehunhu hwebasa, inoderedza mitengo yezvinhu, inoita chinzvimbo chakakosha mukushanda kwezvinhu, uye inosimudzira zvakanyanya kukurumidza kwekugadziriswa kwezvinhu.
Mune ramangwana, conveyor ichaita yakanangana nekukura kukuru, ichiwedzera mashandisiro ekushandisa, otomatiki kurongedza zvinhu, kudzikisa kushandiswa kwesimba, kuderedza kusvibiswa uye zvimwe zvinhu.
1. Ramba uchikura kusvika pamwero mukuru. Chikamu chakakura chinosanganisira hombe yekuburitsa chinzvimbo, hombe yemuchina kureba uye hombe yekuratidzira kona. Kureba kweiyo hydraulic irikupa mudziyo kwasvika zvinopfuura makiromita mazana mana nemakumi mana. Kureba kweimwe bhandi conveyor kwave kuda kusvika makiromita gumi nemashanu, uye kwave kune "bhanhire rekutakura mugwagwa" rinoumbwa nemaseti akati wandei anobatanidza Bato A neChechi B. Nyika zhinji dziri kutsvaga chimiro chakatwasuka chakaringana kwedaro refu uye kugona kukuru kunopfuurira. kuendesa zvinhu.
2.Wedzera chiyero chekushandisa chekutakura. Iko kukura kwetembiricha yakakwira, yakaderera tembiricha mamiriro, inoparadza, radioactive, zvinhu zvinopisa mumamiriro ekunze zvinoshanda, uye zvinogona kutakura zvinopisa, zvinoputika, zviri nyore kusangana, zvinonamira zvinhu zvinotakura.
3. Maumbirwo ehutakuri anogona kusangana nezvinodiwa zve otomatiki kudzora kwechinhu chekubata system yemuchina mumwe chete. Semuenzaniso, trolley conveyor inoshandiswa neposvo kuhofisi yekumhanyisa mapasuru inofanirwa kukwanisa kuita zvinodiwa pakuronga zviito.
4. Kuderedza kushandiswa kwesimba kuchengetedza simba rave chinhu chakakosha pakutsvagisa kwekurapa mumunda wekufambisa tekinoroji. Iko kushandiswa kwesimba kwe1km patani yezvinhu kwakatorwa seimwe yezvakakosha indekisi yekusarudzwa kwekutakura.
5. Deredza guruva, ruzha uye gasi rekudzimisa rinogadzirwa nevatakuri vakasiyana panguva yekushanda.